Noocyada sawirada qadiimiga ah ee Japan: waxa ay yihiin, sifooyinka iyo tusaalooyinka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Noocyada sawirada qadiimiga ah ee Japan
Waxaa jira sawiro, iyadoo ay ugu wacan tahay xariiqdooda garaafka ama midabadooda, loo kala saaray noocyo kala duwan. Waxa jira sawiro taariikhda galay sababtoo ah waxa ka dambeeya shaqadaas faneed, waxa jira jiil is beddelaya, hadday tahay bulsho-siyaasadeed iyo mid bulsho, iyo horukac ay sameeyeen fannaaniin badan.
Taasi waa sababta aan qoraalkan kuugu nimid inaan kaala hadalno qaab ku noqday moodada adduunka farshaxanka iyo naqshadeynta, qaab nagu geynaya meelaha Aasiya oo ay ka buuxaan qaabab sifo ah oo kaliya in la arko iyaga ayaa jeclaan lahaa. ma taqaan sida loo qeexo? Dhab ahaantii, Waxaan ku tusi doonaa adduunka cajiibka ah ee farshaxanka Japan iyo sida ay u saamaysay shuqulladiisa, gaar ahaan sawiradii hore ee Jabbaan.
Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baran doonto safarkan dheer ee Japan oo aad ku dhiirigelin doonto fikradahooda farshaxanka Japan.
1 fanka japan
2 Noocyada sawirada Japan
3.1 mawjada weyn
3.3 fuji cas
Farshaxanka Japan, sidoo kale loo yaqaan nin iyo, Waa farsamo farshaxan iyo farshaxan oo u dhalatay Japan. Erayga laftiisu waxa uu koobay macnayaal dhawr ah, oo ay ku jiraan rinjiyeynta ama sawirka. Farshaxanka Jabbaan waxa uu dhashay oo waxa saameeyay mawjadaha Maraykanka ee ka imanaya Maraykanka tan iyo waagaas, Japan waxa ay ahayd waddan gebi ahaanba katiinadaysan oo la xidhay ilaa inta laga eegayo naqshadaynta seismic-ka.
Aynu sheegno in aanay ahayn ilaa 1853-kii in shaqadu ay bilaabeen in ay fayraska galaan oo ay isu dhigaan suuqa. Xaqiiqda ah in albaabadeeda ay furnaayeen waxay u ogolaatay Japan inay hodan ku noqoto iyada oo ay uga mahadcelinayaan shaqadeeda iyo heerka dhaqan-dhaqaale iyo dhaqan-dhaqameed si ay u koraan una kordhiyaan qaybo siman. Marka la soo koobo, kuwani waa sannado halgan iyo sinnaan dhinaca Japan ah, iyo sidoo kale aqoonsiga dhaqanka.
Isticmaalka midabada cajiibka ah iyo kuwa xoogga leh waa sifo aad u gaar ah oo ku jirta shaqadiisa, tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in farshaxanka Japan ay ka shaqeeyaan isticmaalka midabada midabka, Midabkani waxa ay midabada ka dhigaan kuwo aad u soo jiidasho leh oo muujinaya qaababkooda. Taasi waa sababta farshaxanka Japan u suurtagashay in uu aado fayraska. Sidoo kale, midabadani waxay ka yimaadaan dhirta iyo xayawaanka, taas oo ka dhigaysa rinjiyeynta xitaa mid aad u xiiso badan.
Xaqiiqda ah in shuqullada lagu sameeyay alaabta dabiiciga ah waxay ka dhigan tahay in sawirada, marka ay soo baxaan cimilada sare, ay lumiyaan nuxurkooda oo ay noqdaan kuwo wasakh ah. Taasi waa sababta Japanese, marka ay sawirayaan alaabtan, waxay ku duubeen shaqadooda oo lagu kaydiyey sanduuqyo alwaax ah iyada oo ujeedadu tahay in hawada ama kulaylku aanu iyaga kharribin. Waxaa la yaab leh daryeelka gaarka ah ee shaqooyinka noocaan ah ay leeyihiin, maadaama ay yihiin kuwo dabiici ah.
Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha gaarka ah ee ka jira farshaxanka Japan waa xariiqda ay isticmaalaan si ay u sawiraan. Badanaa waa sawiro laynkoodu fiican yahay si ay foomamkeedu u ilaaliyaan shakhsiyadda iyo dabeecadda Jabbaan ee wakhtigaas. Waa farsamo aad u xiiso badan tan iyo tan waxay u adeegsadeen burush aad u fiican oo la yaab leh.
Noocyada sawirada Japan
Waxaa jira laba kooxood oo waaweyn oo ah sawirradii hore ee Jabbaan. Labaduba waxay ilaalinayaan sifooyin kala sooca oo u eg laakiin isla markaaba ka fogeeya si ay u soo saaraan qaabab cusub oo sawir ah.
Monochrome nihonga waa qaab farshaxan oo Jabbaan ah oo ku salaysan isku dhafka khad aad u madow iyo khad aad u fudud. Ujeedada farsamadani waa in la maareeyo mashruucyo taxane ah oo cad, cawl iyo midab madow leh oo saameynaya codadka cagaarka ah ee shaqooyinka.
Farsamadan. Jabbaanku waxay isticmaalaan khad loo yaqaan khad sumi ama khad yar. Khadkan waxa lagu sameeyaa agabka khudaarta sida dabada qoddaxda ah ama maqaarka xayawaanka. Marka la soo koobo, waa qaab aad u xiiso badan oo ay si weyn u saameeyeen waayihii hore ee Japan.
Si ka duwan farsamadii hore, nihonga polychrome, waxaa loo isticmaalaa khadyo midabyo kala duwan ka yimid oo ka yimaadda badaha ama walxo si toos ah uga yimaadda badda. Habkani waxaa lagu buuxiyaa nolosha, tan iyo pigments leh midabyo aad u dhalaalaya ayaa loo isticmaalaa in lagu gaaro saameyn aad u wanaagsan oo lagu arko shaqooyinka.
Caadi ahaan waxaan u mahadcelineynaa qaabkan marka la eego shaqada halka walxaha sida xayawaanka, buuraha ama muuqaalka dabiiciga ah, iwm. la wanaajiyo. Waxaa jiray shaqooyin badan oo caan ah oo loo adeegsaday farsamadan si wanaagsan, waxaa laga aqoonsaday adduunka oo dhan waxaana lagu soo bandhigay qaar ka mid ah matxafyada ugu fiican adduunka.
Source: My casriga la kulmay
Wave Great waa mid ka mid ah shaqooyinka, ma aha in la xuso ugu muhiimsan ee qaabka hore ee Japan. Waa shaqo la qabtay waxaa qoray rinjiile Katsushika Hokusai. Waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, sababtoo ah rinjiyeyntiisa waxaa lagu sameeyay meel bannaan oo ku saabsan 40 cm.
Waa mid ka mid ah shaqooyinka, in kasta oo ay qayb ka tahay fanka Japan, haddana shaki la'aan waxay ahayd mid ka mid ah matalayaasha gaaray dhammaan geesaha Aasiya. Ma aha oo kaliya in ay ahayd shaqo kacday oo la ogaaday in fanku si qarsoodi ah u qarsoonaa muddo sanado ah, laakiin sidoo kale waxay kicisay dhiirigelinta fanaaniin badan.
Jabbaan Waa mid ka mid ah shaqooyinka waxyiga ah ee uu rinjiyeeyay rinjigii Faransiiska ahaa ee Claude Monet. Ma aha oo kaliya inuu ku dhiiraday inuu isticmaalo qaabkan, laakiin sidoo kale wuxuu ku guuleystay isticmaalka midabada iyo qaababka. Si uu tan u sameeyo, waxa uu dajiyay in uu sawiro shaqo ay ka muuqato qof dumar ah oo ku labisan dharka reer galbeedka oo haysta marawaxad.
Naagtii ka soo muuqatay shaqadiisa, sanado ka dib, waxay u muuqatay inay tahay xaaskiisa Camille, oo, sida uu sheegay, jecel in ay ku labistaan ​​dharka noocan oo kale ah.
Xigasho: Origami Clover
fuji cas waa mid kale oo ka mid ah shuqullada rinjiile reer Japan Katsushika Hokusai. Sharaxaadku wuxuu ilaaliyaa dhererka la mid ah kan hirarka, qiyaastii 40 cm. Shaqadani waxay muujinaysaa mid ka mid ah foolkaanaha ugu xurmada leh iyo calaamad aad u muhiim ah Japan.
Taas awgeed, waxa uu isticmaalay midabyo diirran sida casaan ama bunni kuwaas oo siinaya macne dhamaystiran oo ah waxa uu rabo in uu ku muujiyo shaqadiisa.
Hiroshi Yoshida waa mid ka mid ah fanaaniinta waxyiga ah ee fanka Japan. Waxa uu dhashay 1876-kii, waxa loo yaqaanaa in uu ka mid yahay fannaaniin badan oo ay si weyn u saamaysay dhaqdhaqaaqa Daabacaadda Cusub. Mid ka mid ah walxaha xiddigaha ah ee lagu muujinayo fannaankan ayaa shaki la'aan ah boodhadhkiisa, Waxay leedahay boodhadhyo kala duwan oo aad u ballaaran oo qaabka Japan ee wakhtiga uu taagan yahay.
Intaa waxaa dheer, shuqulladiisa waxaa aad u saameeyay dagaalkii labaad ee aduunka. Marka la soo koobo, mawduuc lagu soo rogay isku dhacyo siyaasadeed oo caalami ah iyo quwado waaweyn oo ka kala yimid adduunka oo dhan.
Waa mid kale oo ka mid ah fanaaniinta ka imanaya daabacaadda. Wuxuu ku takhasusay waxa aan hadda u naqaanno qaabka Nihonga wuxuuna bilaabay inuu horumariyo shaqooyinkiisii ​​ugu horreeyay. Waa mid ka mid ah fanaaniinta ugu saamaynta badan Tokyo sidoo kale waxa uu si wada jir ah u bartay tusaalaynta fanaaniinta sida Hiroshi Yoshida. Shaki la'aan, shuqulladiisu waxay sidoo kale ahaayeen tixraac farshaxan oo adduunka oo dhan laga aqoonsaday.
Waxa ugu badan ee lagu garto shaqadiisa waa isticmaalka khadadka monochrome iyo isku dhafka midabada dhalaalaya iyo kuwa dhalaalaya kuwaas oo maareynaya soo jiidashada dareenka dadweynaha. Shaki la'aan waa mid ka mid ah fanaaniinta xiddigaha.
Sida aan hore ugu soo aragnay shaqadiisa, waa mid ka mid ah rinjiyeyaashii ugu muhiimsanaa ee farshaxanka Japan. Waxa ugu badan ee ka muuqda shaqadiisa waa in uu ku sawiro wareegyada iyo hirarka taas oo u oggolaanaysa in ay kor u qaaddo guud ahaan shaqadiisa, waxaad mooddaa in shaqadiisu si lama filaan ah u soo noolaatay oo ay dhaqaaqi karto.
Sidoo kale Waxa uu ahaa qoraaga hawlo kale oo badan, sida Hokusai Manga, halkaas oo uu kaga hadlayo mowduucyo ku saabsan magaalada uu ku nool yahay oo uu uga sheekeeyo waayaha iyo waayaha. Shaki kuma jiro inuu yahay mid ka mid ah rinjiyeeyayaasha ugu wanaagsan fanka Japan.
Ugu dambayntiina waxaanu haynaa xirfadle Jabbaan ah oo farsamada loo yaqaan daabacaadda alwaaxa ee Jabbaan, oo sidoo kale loo yaqaanno daabacado. Noloshiisa oo dhan, waxa uu naftiisa u huray samaynta dhar-xidhka halkaas oo uu ku dhiiri galiyay qaar ka mid ah riyooyinkii uu ku riyooday, waxa uu sidoo kale ku daray waxyaabo ay ka mid yihiin sheekooyinka naxdinta leh sida rooxaanta iyo waxyaabo kale oo ka baxsan xaqiiqada.
Shaqooyinkiisa ugu caansan waxaa ka mid ah badmaaxiyaha Tokuso, waaberiga sanadka cusub ama bisadaha ku dayanaya 53 xilli. Shaki la'aan waa mid ka mid ah fanaaniinta Japan ugu muhiimsan marka la eego samaynta daabacaadda.
Habka Jabbaan ayaa shaki la'aan wax ka beddelay fanka aan maanta naqaanno. Waxaa jira shaqooyin badan oo la sameeyay iyo fanaaniinta oo ku soo biiray.
Waxaan rajeyneynaa inaad ku riyaaqday safarkan dheer laakiin gaaban ee aad ku tagtay meelo Aasiya ah iyo inaad baratay farshaxanka iyo dhaqanka Japan ee qadiimiga ah. Haddii aad ka fiirsato biraawsarkaaga, waxaad ogaan doontaa inay jiraan shaqooyin kale oo badan iyo inay jireen sannado badan oo halgan faneed loogu jiray Jabbaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Noocyada sawirada qadiimiga ah ee Japan